Ogaden News Agency (ONA) – Addis Ababa oo Noqotay Mida Ugu Dibdhacsan Caasimadaha Aduunka.
Addis Ababa oo Noqotay Mida Ugu Dibdhacsan Caasimadaha Aduunka.
Hay’ada caalamka uqaabilsan dhinaca horumarka ayaa warbixin dheer oo ay soo saartay kusheegtay in ay magaalada Addis Ababa noqotay mida ugu liidata caasimadaha aduunka.
Sida ay hay’adu sheegtay magaalada Addis Ababa ayaa ah magaalada ay kunool yihiin dadka ugu badan ee aduunka ugu saboolsan kuwaas oo kunool wax dadka aduunku uusan kunoolayn ama uusan kunoolaan karinba.
Hay’ada ayaa qoraalkeeda ku xustay in magaalada Addis Ababa ay jiraan dad kunool qashinka lasoo daadiyay isla markaana aan heli karin wax ay karsadaan oo ay noloshooda kudabaraan.
Sidoo kale hay’ada ayaa dhinaca dhismaha magaalada Addis Ababa ku sheegtay caasimada ugu liidata aduunka marka la eego inta ay hay’adu daraasada ku samaysay, sidoo kale hay’ada ayaa kadayrisay dhinaca shaqooyinka ay dadwaynuhu heli karaan.
Xukuumada gumaysiga Itoobiya ayaa dhinaceeda soo bandhigta hormar ay kusheegto in ay dadkeedu kunaaloodaan kaas oo la ogaaday in uu yahay mid aan waxba kajirin oo dowladaha aduunka lagu marin habaabinayo.
Sidoo kale dhaqaalaha Itoobiya ayaa la ogaaday in ay ka faa’iidaystaan dad yar oo ah dadka awooda wadanka kacanta kuhaya ee kasoo jeeda qoomiyada tirada yar ee Tigreega waxaana lasheegayaa in shakhsiyaadka ugu awooda badan wadanka ay meelaysteen dhaqaalihii wadanka.
Sikastaba ha ahaatee sheegashadii xukuumada wayaanaha ee ahayd in ay hormar gaadhsiisay wadanka Itoobiya ayaa la xaqiijiyay in uu yahay war been abuur ah oo aan waxba kajirin.